Avelao Izahay Hitsifitra : Tonga Any Rosia Ny Graffiti Ortodoksa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Mey 2017 4:57 GMT
Sary: https://vk.com/rimrus_blog. Ny tenifototra nomen'ny fiangonana alalana eo ivelan'ny katedraly ortodoksa Rosiana ao an-tanàndehiben'ny Volgodonsk mivaky hoe “Andriamanitra dia Fitiavana.”
Mazàna tsy mitovy tadin-dokanga ny Eglizy Ortodoksa Rosiana sy ny zavakanto an-dalambe, kanefa nanaporofo ny zavatra naningana tamin'izany fomba fijery izany ny fiaraha-miasa vao haingana teo amin'ny mpanakanto an-dalambe sy ny Pretra any amin'ny faritany .
Tamin'ny volana lasa, nahatsikaritra ny mpanakanto iray izay antsoina hoe “Rimrus” avy any an-tanàndehiben'ny Volgodonsk any amin'ny faritra atsimon'i Rosia fa feno graffiti ny rindrina manodidina ny fiangonana Ortodoksa tao an-tanàna niavian , ary nanapa-kevitra ny hanao zavatra mikasika izany izy. Tao amin'ny taratasy ho an'ny Pretra eo an-toerana, nanome soso-kevitra i Rimrus fa ho fenoina graffiti amin'ny zavakantony an-dalambe ny fiangonana ary nanolo-kevitra ny endrika hamolavolana izany izy. Nanome fahazoan-dalana avy hatrany ny Pretra ary nanome loko ho ampiasain'ilay mpanakanto mihitsy aza.
Ny vokatry ny asan'i Rimrus ? Ny tenifototra maroloko izay mivaky hoe “Andriamanitra dia Fitiavana.”
Araka ny fanazavan'i Rimrus tao amin'ny fifanakalozan-kevitra tao amin'ny aterineto Pikabu , namita ny asany teo amin'ny rindrina nandritra ny telo andro izy rehefa nahazo alalana an-tsoratra avy amin'ny Pretra. Maro ny mpandalo no nanohana ny asany, nefa nisy olona iray no tsy nankasitraka izany ary nandrahona ny hiantso polisy. Rehefa vita ny asany, nomen'ny vehivavy tao an-toerana mofomamin'ny Paska nentim-paharazana miisa telo mba ho fisaorana azy i Rimrus .
Talohan'ny nandokoan'i Rimrus ny rindrina . Sary: Pikabu.ru
Raha nanazava ny antony nanosika azy hanao fandokoana ho an'ny fiangonana i Rimrus dia nilaza fa “tiany ny mampifandray ny zavatra izay heverina fa tsy azo tanterahina.” Nilaza ihany koa izy fa ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny Eglizy Ortodoksa toy izany no voalohany tamin'izany tao Rosia, raha tsy hoe eto amin'izao tontolo izao.
Milaza ny tenany ho toy ny “mpino tsy mpiditra am-piangonana” i Rimrus ary nanao fitsikerana tao anaty taratasiny ho an'ny Fiangonana. Tao amin'ny taratasiny ho an'ny Pretra, niampanga ny Eglizy Ortodoksa Rosiana i Rimrus ho tsy mavitrika sy ny “famelana ny vahoaka ho irery.”
Tranga tsy fahita firy amin'ny fivelarana mankany amin'ny kolontsaina malaza avy amin'ny Fiangonana Ortodoksa Rosiana ny graffiti ao Volgodonsk. Vao tamin'ity herinandro ity, nanohitra ny tantaran'ny The Simpsons izay mampiseho an'i Homer nilalao Pokemon Go tao am-piangonana ny mpitondra fivavahana. Nilaza i Andrey Novikov, Pretra ao amin'ny Fiangonana Trinite Manome Aina ao Moskoa, fa fanentanana hanaovana “Fitondran-tena ara-môraly diso làlana” ny vanim-potoana vaovao amin'ilay sariitatra.
Misy fampitahana mazava teo amin'ny toerana sy ny raharahan'ilay Rosiana Sokolovsky, izay nosamborina tamin'ny taona 2016 rehefa avy nandefa ny lahatsarin'ny tenany milalao Pokemon Go tao amin'ny fiangonana ortodoksa tao an-tanàndehiben'i Ural ao Yekaterinburg. Miatrika hatramin'ny telo taona sy tapany an-tranomaizina i Sokolovsky izay ho fantatra amin'ny 11 May ny didim-pitsarana momba azy .
Na dia voaravaka amin'ny lamaody hafahafa aza ny rindrina manodidina ny iray amin'ireo fiangonana ao Rosia amin'izao fotoana izao, dia hita fa mbola mijanona ho ortodoksa foana hatrany ny fahitalavitra tian'ny mpitondra fivavahana .